आज १५ औं राष्ट्रिय धान दिवस, कृषकहरु रोपाइँमा – www.janabato.com
Latest Taja-update TOP STORIES अर्थ / पर्यटन अर्थ / पर्यटन Sidebar
१५ असार २०७५, शुक्रबार ०४:२३ June 29, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
आज असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। ‘धान उत्पादनमा वृद्धिः राष्ट्रको समृद्धि’ नारासहित मुलकुभर मनाइँदैछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क) र विभिन्न राजनीतिक किसान संगठनहरूले पनि छुट्टै कार्यक्रम गरेर धान दिवस मनाउँदै छन्। असार १५ लाई दही चिउरा खाने दिनका रुपमा पनि लिइन्छ ।
कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका धेरै नागरिकको मुख्य पेसा कषि नै हो। वर्षभरका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न यो महिना किसान खेतीपातीमा व्यस्त हुने गर्छन्।
धान नेपालको प्रमुख अन्नबाली हो । धान उत्पादन बढ्दा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य पनि बढ्छ। कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये धानको योगदान १२ प्रतिशत छ। कृषिको परनिर्भरता कम गर्न र किसानलाई हौसला दिन धान दिवस मनाउने गरिएको हो।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष अलि अगाडि नै मनसुन सक्रिय भएकाले असार लागेसँगै मुलुकभर रोपाइँ सुरु भएको छ। अहिलेसम्म देशभर साढे १२ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ सकिएको छ। कृषि विभागका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा यो वर्षको असार पहिलो साता उल्लेख्य मात्रामा रोपाइँ भएको छ। ०७२ को असार पहिलो साता देशभर सात दशमलव आठ प्रतिशत र २०७३ को यस अवधिमा नौ दशमलव १५ प्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ।
२०७४ को असार पहिलो साता आठ दशमलव ८६ प्रतिशत हाराहारी रोपाइँ भएको विभागको अभिलेखले देखाउँछ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी रोपाइँ सुदूरपश्चिममा छ । तुलनात्मक रूपमा सुदूरपश्चिमको बझाङमा ७० र हुम्लामा ८० प्रतिशत हाराहारी रोपाइँ सकिएको छ। बाँकेमा रोपाइँ नै सुरु भएको छैन। कपिलवस्तुमा १०, रूपन्देहीमा १५, नवलपरासीमा ३०, मोरङमा पाँच, सुनसरीमा १५, सप्तरी र सिरहामा एक र झापामा एक दशमलव पाँच प्रतिशत हाराहारी रोपाइँ भएको छ। नेपालको कूल जनसंख्याअनुसार स्वदेशमै धान उत्पादन नहुँदा बर्सेनि अर्बौं मूल्यको चामल भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
← प्रदेश नं. ५ मा राहत वितरण मापदण्ड स्वीकृत
सहिद–बेपत्ता परिवार बीच मैत्रीपूर्ण फुटवल →
घिमिरेलाई सेनाको मानार्थ सहायक रथी
२७ माघ २०७४, शनिबार १२:०४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on घिमिरेलाई सेनाको मानार्थ सहायक रथी
विचार र कलाको संयोजन :जनघोष मासिकको नयाँ अङ्क बजारमा
२ पुष २०७४, आईतवार ०४:३८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on विचार र कलाको संयोजन :जनघोष मासिकको नयाँ अङ्क बजारमा